अष्ट्रेलियाको मेलबर्नका यी चित्रकार जे बनाए पनि विवादमा पर्छन् ! - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियाको मेलबर्नका यी चित्रकार जे बनाए पनि विवादमा पर्छन् !
Posted by Himalayan Kangaroo | २० श्रावण २०७३, बिहीबार ०४:५० |
मेलबर्न । अष्ट्रेलियाको मेलबर्न निवासी विवादास्पद चित्रकार लश्सक्सको पछिल्लो चित्रहरुले विश्वकै ध्यान तानेको छ भने अमेरिकाको ह्वाइट हाउसको निद उडाएको छ ।
वाल पेन्टिङबाट आफ्नो सिर्जनात्मक अभिव्यक्ति दिदै आएका उनले पछिल्लो समयमा बनाएका दुई चित्रले उनलाई थप विवादित बनाएको हो । अमेरिकाका भावी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार ट्रम्प र हिलारी क्लिन्टनको कार्टुन चित्रका कारण उनी अहिले चर्चामा छन् । उनले केही दिन अघि ट्रम्पका मोडल श्रीमति मेलिनाको नाङ्गो छाति सहितको चित्र बनाएका थिए । मेलबर्नको घरका भित्ताहरुमा बनाएका ती चित्रलाई उनले इन्स्टाग्राममा समेत राखेका थिए । उनको उक्त चित्र विवादमा परेपछि लश्सक्सले पछि मेलिनको दुवै स्तनमा ट्रम्पको चित्र कोरिदिएका थिए । त्यसले झन् विवादलाई उचाइ दियो ।
मेलबर्नका यी चित्रकारले त्यतिमा मात्र चित्त बुझाएनन् । उनले फेरि अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार ट्रम्पको पनि नग्न चित्र बनाए । उक्त चित्रको गुप्ताङ्गको भागमा हिलारीको मुहारचित्र बनाइदिएपछि त झनै उनको चित्र र उनको शैलीको व्यापाक विरोध र आलोचना दुवै भए ।
विरोध र आलोचना भइरहेकै समयमा चित्रकार लश्सक्सले हिलारी क्लिन्टनको अर्को अर्धनग्न चित्र बनाए । अमेरिकी झण्डाको स्वीमिङ कस्टुम लगाएकी हिलारीको उक्त अर्धनग्न चित्रको पनि विरोध भयो ।
एकपछि अर्को गर्दै विवादित चित्र बनाएर मेलबर्नका भित्ताहरु रंगाउँनुका साथै सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा समेत पोष्ट गर्न थालेपछि मेलबर्नको राज्य काउन्सिल वैठकमै चित्रकार लश्सक्समाथि कारवाही हुनुपर्ने आवाजहरु उठे । त्यसक्रममा उनको सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिवन्ध लगाउँनुपर्ने धारणा समेत केहीले राखे ।
अन्ततः मेलबर्न सरकारले चित्रकार लश्सक्सको इन्स्टाग्राम एकाउन्ट बन्द गरिदिएको छ । हिलारीको अर्धनग्न चित्र भाइरल बन्न थालेपछि इन्स्टाग्रामले कुनै चेतावनी विना नै उक्त चित्र आफैं हटाइदिएको थियो । अहिले आएर १ लाख ७ हजार भन्दा बढी फलोअर्स भएको उनको इन्स्टाग्राम एकाउन्ट पनि डिलेट गरिदिएको हो ।
मेलबर्न सरकार र इन्टाग्रामले आफ्नो अभिव्यक्तिको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेकोमा चित्रकार लश्सक्सले आपत्ति जनाएका छन् । त्यसको विरोधस्वरुप उनले हिलारीको अर्धनग्न तस्वीरलाई मोडिफाइड गरेर आँखा मात्र बाँकी राखेर सबै शरीर मुस्लिम पहिरन बुर्काले डाकिदिएको चित्र बनाएर फेरि सार्वजनिक गरिदिएका छन् । उनको उक्त चित्र पनि अहिले भाइरल बन्नुका साथै विवादित बन्न थालेको छ ।
Previousप्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध चर्को नारा लगाउँने युवक पक्राउ
Nextविहीवार माओवादीका तीन मन्त्री बन्ने,काँग्रेसका निधि र कोइराला पक्का
३ मंसिर २०७२, बिहीबार ०३:२९
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर अष्ट्रेलिया आइपुगिन्,शनिवार सिड्नीमा सम्मान
३० असार २०७३, बिहीबार ०४:२४
अष्ट्रेलियाको भिसामा परिवर्तनको संकेत : रिजनल भिसा लिनेहरु अब ग्रामिण भेगमै बस्नुपर्ने